Iyo itsva watchOS 2.2.2 vhezheni inowanikwawo | Ndinobva mac
Iyo itsva watchOS 2.2.2 vhezheni inowanikwawo
Kune vashandisi vakati wandei vakatiudza izvozvo watchOS 2.2.2 vhezheni inowanikwawo kurodha pasi, saka kunyangwe iri yekuvandudza yakanangana nekugadzirisa tudiki uye nekuvandudza kuchengetedzeka, isu tichazviparadzira.
Nezuro masikati pasina mubvunzo yaive imwe yeanogadzira maererano neshanduro dze beta uye shanduro dzekupedzisira dzevashandisi uye ikozvino tine izvo zvisingazivikanwe mune OS X, watchOS uye iOS kana tichizowana mamwe mabheti kusvika kuvhurwa kwepamutemo kwemaitiro matsva ekushanda. munaGunyana, musimboti zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti hongu, asi zvichaonekwa svondo rinouya ...
Apple inobatanidzwa zvizere mukugadzirisa zvikanganiso uye kugadzirisa matambudziko mushanduro dzazvino kudzamara kwasvika masystem matsva nekuvhurwa kweiyo nyowani iPhone uye pamwe MacBook Pro, asi kunyange izvi zvisingaitike, basa rinoenderera pane dzazvino shanduro dzekusiya ivo se zvakanakisisa sezvinobvira.
Mune yangu nyaya ndinogona kutaura kuti handina kuona shanduko pakati peiyo vhezheni yeOS X El Capitan 10.11.5 uye iyi nyowani vhezheni 10.11.6 sezvo zvese zvakashanda zvakanaka. Pamwe zvishoma zvakanyorova asi ini hapana kana chimwe chandinoona uye mune iyo iPhone uye smart wachi inogona kunge yakafanana, sezviri pachena hapana shanduko dzakakura maererano nemabasa kana mashandiro emidziyo, kunyangwe chii chiri inokurudzirwa mune zvese zviitiko zvinogara zviri kugadzirisa kune yazvino vhezheni inowanikwa.
Rangarira kumutsiridza iyo iPhone kutanga shanduro 9.3.3 uye wozovandudza Apple Watch kuOSOS 2.2.2 nenzira iyi tichava nemidziyo yese yakagadziridzwa. Kuti uvandudze Apple Watch zvakanakisa kuve pamba nechishandiso pane yekuchaja base uye une nguva yekuchengetedza sezvo zvinotora nguva yakareba kuti ivandudze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo itsva watchOS 2.2.2 vhezheni inowanikwawo
Aya angave mutsauko pakati peiyo iPhone 7 pamwe uye 7 Pro
Iyo Apple Pay yekubhadhara system inosvika zviri pamutemo muFrance